विमानस्थल नजिकैं आगलागि : करोडौंको धनजनको क्षति भएको आशंका !
राँझा । नेपालगञ्जका दुई मेडिकल र एक किराना पसलमा गए राति आगलागी हुँदा लाखौँको जलेर सामान नष्ट भएको छ । बिपीचोक नजिकै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल अगाडि रहेको राकेशकुमार कुम्हालको सफा मेडिकल र लालुमाया चलाउनेको माया फार्मेसी र धीरज जनरल स्टोरमा मध्यरातमा आगलागी भएको थियो । आगलागीबाट मेडिकलमा रहेका सम्पूर्ण औषधि र किराना पसलको सामान जलेर नष्ट भएको नेपालगञ्ज वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिए ।
विद्युत् चुहिएर आगलागी भएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आगलागी भएको थाहापाउनासाथ आएका सुरक्षाकर्मी, दमकल र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगो निभाए पनि औषधिजन्य वस्तु जलेर नष्ट भएको बताए । सफा मेडिकलका सञ्चालक राकेशकुमार कुम्हालले रु ५० लाखभन्दा बढीको औषधि नष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले रु ४५ लाखमा पसलको बीमा गरेका थिए ।
औषधि व्यवसायी सङ्घ जिल्ला अध्यक्ष अभयकुमार बस्नेतले दुई मेडिकलमारु ९० लाख बढीका औषधि जलेर नष्ट भएको अनुमान गरिएको तातोका कारण भएका औपधि पनि प्रयोग गर्ने नहुने जानकारी दिए । केही महीना अगाडि मात्रै नेपालगञ्जकै धम्वोझीमा रहेको जीवन शर्माको औषधि पसलमा पनि आगलागी भएको थियो ।
विकल्प बने मिस्टर नेपाल
घुस्याहा डीएसपीलाई टीभीले पुगेन, सोकेस पनि चाहियो !
दुईपाङ्ग्रे सवारीको लाइसेन्सबाहेक सबै काम सतुंगलबाट
कलंकी नागढुंगा सडक, जहाँ सरकार छ !
प्रधानमन्त्री ओलीलाई डा. केसीको जवाफः ‘म त्यो भन्न आएको होइन’
बलात्कार रोक्न महिलालाई आत्मरक्षा तालिम
घुम्ती शिविरबाट ७ सयले पाए नागरिकता
प्रहरीले फेरि समायो तस्करीको तीन किलो सुन
माधव नेपालसँग २९ सालदेखि घनिष्टता छ : प्रधानमन्त्री
५९ सय पदमा ५ लाख ६७ हजार आवेदन
जनताले राजा र हिन्दुराष्ट्र चाहेका छन : अध्यक्ष थापा
बाबरी मस्जिद भत्काइएको आजको दिन जसले बदलिएको थियो भारतको राजनीति